Guddoomiyaha Baarlamaanka oo u ambabaxay Magaalada Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo u ambabaxay Magaalada Baydhabo
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa u ambabaxay Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Safarka Jawaari uu ugu ambabaxay Magaalada Baydhabo, ayaa waxaa ku wehliya Xubno ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, sida wararka ay sheegayaan.
Ujeedka Safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka uu ugu ambabaxay Magaalada Baydhabo, ayaa lagu sheegay inay tahay iyadoo maalmaha soo socda Magaalada Baydhabo uu ka furmo doono Shirka Madasha Wadatashiga Qaran.
Xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran, Shirkoodii ugu dambeeyay go’aanadii ka soo baxay, ayaa waxaa qayb ka ahaa Shirka Madasha Wadatashiga Qaran in lagu qabto Magaalada Baydhabo.
Ammaanka Magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyay oo la filaayo 20-ka Bisha oo ku beegan Isniinta soo socota inuu si rasmi ah Shirkaga kaga furmo.
Suxufiyiinta ku sugan Magaalada Baydhabo ayaa soo sheegaya Madaxda Maamulka Koonfur Galbeed inay u diyaargaroobeen martigelinta Shirkaasi culus.
Somaliya ayaa looga diyaargaroobayaa qabsoomida Doorasho la filaayo in dalka isbedel hogaamineed ay ku keento.
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Saraakiil ka socotay Bankiga Aduunka (SAWIRRO)